နောက်လမှာ ရောင်းမယ့် Samsung Galaxy Fold | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone နောက်လမှာ ရောင်းမယ့် Samsung Galaxy Fold
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 20: DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division of Samsung Electronics, announces the new Samsung Galaxy Fold smartphone during the Samsung Unpacked event on February 20, 2019 in San Francisco, California. Samsung announcedanew foldable smart phone. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
နောက်လမှာ Samsung Galaxy Fold ကို ရောင်းမယ်လို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရက်အတိအကျကိုတော့ မကြာခင်မှာ တရားဝင်ကြေညာနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် ရောင်းချမယ့် အချိန် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
ဆမ်ဆောင်းက မီဒီယာများကို စမ်းသပ် အသုံးပြုဖို့ ပေးထားတဲ့ Galaxy Fold များဟာ ရက်ပိုင်းပဲ သုံးရသေးချိန်မှာ စကရင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဧပြီလက သတင်းများတက်လာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆမ်ဆောင်းက စကရင်ကို ပိုပြီး ကောင်းအောင် ပြုပြင်ရမှာ ဖြစ်လို့ ရောင်းချမယ့် ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
The Verge ရဲ့ Dieter Bohn က စကရင် ၂ ခုရဲ့ အဆက်မှာ အက်ရာများ ပေါ်လာပြီး အက်ကြောင်းကို အားနဲ့ ဖိလိုက်ရင် စကရင် ကွဲအက်သွားတယ်လို့ သူက ဧပြီလတုန်းက ရေးသားထားပါတယ်။ CNBC ကို ပေးထားတဲ့ အလုံးကလည်း ၂ ရက်အတွင်းမှာပဲ စကရင်ဟာ သုံးလို့ မရတော့ဘူးလို့ ရေးသားထားပါတယ်။ Bloomberg ရဲ့ Mark Gurman နဲ့ YouTube မှ နာမည်ကျော် Reviewer တစ်ဦး ဖြစ်သူ Marques Brownlee ကလည်း အလားတူ ပြဿနာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
စကရင်ကို ကာကွယ်ထားတဲ့ အလွှာတစ်ထပ်ကို ဖယ်လိုက်လို့ ဒီလို ပြဿနာတက်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းက ဈေးကွက်ထဲကို ရောင်းမယ့် အလုံးများမှာ အပေါ်ယံ အလွှာကို မဖယ်ရှားဖို့ သတိပေးစာ ကပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Review Unit များမှာတော့ သတိပေးစာ မကပ်ထားပါဘူး။
ဒီသတင်းများ တက်လာပြီးနောက်မှာ ဆမ်ဆောင်းက ကြေညာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ စကရင်မှာ ကပ်ထားတဲ့ အလွှာကို မဖယ်ရှားဖို့နဲ့ ပြဿနာ တက်နေတဲ့ Review Unit များကို သေချာစွာ စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ကုမ္ပဏီက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ ခဏလေး ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်တဲ့ အတွက် ရောင်းချမယ့် ရက်ကို နောက်ဆုတ်ခဲ့တာပါ။
နောကျလမှာ ရောငျးမယျ့ Samsung Galaxy Fold
နောကျလမှာ Samsung Galaxy Fold ကို ရောငျးမယျလို့ ကုမ်ပဏီရဲ့ အရာရှိတဈဦးက ပွောလိုကျပါတယျ။ ရကျအတိအကကြိုတော့ မကွာခငျမှာ တရားဝငျကွညောနိုငျပါတယျ။ နိုငျငံအလိုကျ ရောငျးခမြယျ့ အခြိနျ ကှဲပွားနိုငျပါတယျ။
ဆမျဆောငျးက မီဒီယာမြားကို စမျးသပျ အသုံးပွုဖို့ ပေးထားတဲ့ Galaxy Fold မြားဟာ ရကျပိုငျးပဲ သုံးရသေးခြိနျမှာ စကရငျ ပွဿနာမြား ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ ဧပွီလက သတငျးမြားတကျလာပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ ဆမျဆောငျးက စကရငျကို ပိုပွီး ကောငျးအောငျ ပွုပွငျရမှာ ဖွဈလို့ ရောငျးခမြယျ့ ရကျကို ရှဆေို့ငျးမယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
The Verge ရဲ့ Dieter Bohn က စကရငျ ၂ ခုရဲ့ အဆကျမှာ အကျရာမြား ပျေါလာပွီး အကျကွောငျးကို အားနဲ့ ဖိလိုကျရငျ စကရငျ ကှဲအကျသှားတယျလို့ သူက ဧပွီလတုနျးက ရေးသားထားပါတယျ။ CNBC ကို ပေးထားတဲ့ အလုံးကလညျး ၂ ရကျအတှငျးမှာပဲ စကရငျဟာ သုံးလို့ မရတော့ဘူးလို့ ရေးသားထားပါတယျ။ Bloomberg ရဲ့ Mark Gurman နဲ့ YouTube မှ နာမညျကြျော Reviewer တဈဦး ဖွဈသူ Marques Brownlee ကလညျး အလားတူ ပွဿနာ ဖွဈနတေယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
စကရငျကို ကာကှယျထားတဲ့ အလှာတဈထပျကို ဖယျလိုကျလို့ ဒီလို ပွဿနာတကျသှားတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဆမျဆောငျးက ဈေးကှကျထဲကို ရောငျးမယျ့ အလုံးမြားမှာ အပျေါယံ အလှာကို မဖယျရှားဖို့ သတိပေးစာ ကပျထားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Review Unit မြားမှာတော့ သတိပေးစာ မကပျထားပါဘူး။
ဒီသတငျးမြား တကျလာပွီးနောကျမှာ ဆမျဆောငျးက ကွညောခကျြတဈခု ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ စကရငျမှာ ကပျထားတဲ့ အလှာကို မဖယျရှားဖို့နဲ့ ပွဿနာ တကျနတေဲ့ Review Unit မြားကို သခြောစှာ စဈဆေးသှားမယျလို့ ကုမ်ပဏီက ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒီပွဿနာဟာ ခဏလေး ဖွရှေငျးလို့ မရနိုငျတဲ့ အတှကျ ရောငျးခမြယျ့ ရကျကို နောကျဆုတျခဲ့တာပါ။
Previous articleAndroid One Phone ဖြစ်တဲ့ Nokia 2.2 ကို ကြေညာ
Next articleဒေါ်လာ သန်း ၆၀ နဲ့ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းကို အလည်သွားနိုင်မည်